जेलमा रेशम चौधरी र महेश बस्नेत बीच डिल्लीबजार कारागार भेटघाट, के भयो कुराकानी ? – Khabar Patrika Np
जेलमा रेशम चौधरी र महेश बस्नेत बीच डिल्लीबजार कारागार भेटघाट, के भयो कुराकानी ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७ समय: १७:०४:२०
काठमाडौं । व्यक्ति हत्याको आरोपमा जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई एमालेका सांसद महेश बस्नेतले भेटेका छन् । कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई भेट्न शुक्रबार नेता बस्नेत डिल्ली बजार कारागार पुगेका हुन् ।
सत्तारुढ एमाले र जसपाको एक समूहबीच सत्ता सहकार्यका लागि चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त राखिएका बेला सांसद बस्नेत निलम्बित सांसद् समेत रहेका चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगेका हुन् ।
जसपाको निर्वाचित सांसदसमेत रहेका चौधरीको रिहाइका लागि वार्ता टोली बनाएर छलफलमा आउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा पुगेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेका बेला सांसद बस्नेत डिल्लीबजार कारागार पुगेका हुन् ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीको रिहाइका लागि जसपाले आवाज उठाउँदै आएको छ । सरकारलाई समर्थन दिन चौधरीको रिहाइलाई जसपाले शर्त बनाउँदै आएको छ ।
सत्ता सहकार्य र चौधरीको रिहाइका विषयमा एमाले र जसपाबीच वार्ता भइरहेका बेला भएको बस्नेत र चौधरीको भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उनीहरुबीच के कुराकानी भयो भन्ने खुलेको छैन ।
जसपामा ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने दुवै मत देखिएको छ । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका नेता ओली सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने मत राख्छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
यही बेला जेलमा रहेका चौधरीलाई भेटन् बस्नेत पुगेका हुन् । केही दिन अघि राजेन्द्र महतो र एक शक्तिशाली मन्त्रीले पनि चौधरीलाई भेटेका थिए । बिहीबार माइतीघर मण्डलामा पुगेर गृहमन्त्री बादलले चौधरीको रिहाइको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै वार्ता टोली बनाएर छलफलमा आउन भनेका थिए । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।